mardi, 17 mai 2016 13:47
Toamasina : Fiaramanidina nidoboka, zandary frantsay iray naratra
Nisy fiaramanidina kely, karazany ULM, nianjera tao Tanambao Verrerie manakaiky ny orinasa Zeren teo aloha androany maraina. Teratany frantsay, izay zandary avy any La Réunion tonga tao Toamasina tamin'ny alahady, no nitondraza azy.Efa nanana olana ara-motera ilay fiaramanidina tamin'ny fahatongavany. Efa namboarina kosa anefa, ka nahazo "plan de vol" ho any Mananjary. Na izany aza dia mbola tsy nanome "top" ny teo anivon'ny Asecna sy ny ACM Toamasina.
lundi, 16 mai 2016 21:56
May ny Tsenan'Isotry
May kila tsy nisy azo noraisina ny Tsenan'ny Tsiafahy eny Isotry . Tokony ho tamin'ny 1ora maraina no nitrangan'ny loza ary tany amin'ny valo ora tany ho any vao maty tanteraka ny afo, araka ny filazan'ny Gardien dia nisy olona roa nitondra Moto nirifatra ka nanipy irony karazana afo miaraka amin'ny tavoangy misy lasantsy irony ary izay no nahatonga ny loza.
vendredi, 13 mai 2016 21:53
Mampikony: Nisokatra ny Clinique Saint Georges
Notokanana androany 13 mai 2016 teto Mampikony ny Clinique Saint Georges. Izay toeram-pitsaboana tsy mena mitaha amin'ireo hopitaly harifomba sy manana mpitsabo mahay. Tonga teto nitokana izany ny Talen'ny kabinetran'ny ministeran'ny fahasalamana, ny Pr Willy Randriamarotia, ny lehiben'ny Faritra Sofia Atoa Tohanaina Zaranaina Ernest, niaraka tamin'i mpitsabo mpanorina ny clinique Saint Georges, Dr Odilon Tsarahita. Taorian'ny fanapahana ny ruban, dia niroso nitsidika ny toeram-pitsaboana ireto vahiny sy ny mpiara-miasa ary ireo olomanankaja maro teto Mampikony sy ny manodidina. Miampy iray izany ny ivo-toerampitsaboana izay misy eto an-toerana ka tsy voatery andeha lavitra intsony ny marary arakaraky ny fahafaha-manao misy eo amin'ny tsirairay.
vendredi, 13 mai 2016 21:09
13 mai 1981 - 13 mai 2016: 35 taona lasa, nisy nitifitra ny Pape Joany Paoly II
Voatifitry ny bala 3 ny Pape Joany Paoly II ny 13 mai 1981 ka i Mehmet Ali Ağca izay mpikambana tao amin'ny vondrona Turque antsoina hoe "Loups gris" no nahavanon-doza tamin'izany teo amin'ny Place Saint-Pierre tao Roma.
vendredi, 13 mai 2016 18:39
Kianjan'i 13 mai: HERY famoretana
Nisavorovoro ny teny amin’ny Kianjan’ny 13 mai, feno miaramila, zandary, polisy, hatramin'ny polisy monisipaly teny Analakely anio. Noraran'izao fitondrana izao ny fanamarihana malalaka ireo mpitolona lavo ho an'ny Fahaleovan-tenan'ny Firenena ary ho fandravana ny Jadona.
vendredi, 13 mai 2016 18:37
Sakaraha: Manafika ny dahalo
Dahalo tokony ho 50 isa teo no nanafika ny fokontany iray antsoina hoe Ankaboka Kaominina Andranolava distrikan'ny Sakaraha tokony ho tamin'ny 5 ora maraina teo.
jeudi, 12 mai 2016 22:20
Sambava : Misy trano miorina hatrany anaty lalam-pirenena
Mitodika any amin'ny Benin'ny tanana vaovao ny mason'ny vahoaka eto Sambava noho ny fahitana ireo trano vaovao izay aorina ao anaty lalam-pirenena izay mitady hahatapaka ny lalana, satria lasan'ny mpanam-bola ka izao nanaovana trano vato mafy orina izao. Rehefa nanontaniana ny Ben'ny Tanàna dia nilaza izy fa tsy izy no nanome ny «permis de construire» an’ireo trano ireo. Fa iza ary ? Mbola ankamantatra ! Fa na izany dia nanome roa volana izy mba hanesorana ireny trano niorina tao anaty lalana ireny.
vendredi, 06 mai 2016 11:08
Farafangana : Hetsiky ny mpanao gazety
Nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny Falalahan'ny asa fanaovan-gazety ny 3 mey ny fikambanan'ny mpanao gazety ALJM any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Famelabelarana narahina adihevitra tao amin'ny Austral Hotel ny tolakandro, izay nampitaina mivantana tamin'ny onjampeo rehetra tao Farafangana. Novoboasana tamin'izany ny falalahan'ny asa fanaovan-gazety, ny fahazoana vaovao izay zo fototra, ny niandohan'ny gazety Malagasy ary ny tantaran' ny fikambanana ALJM.
Sambava : Hampiantrano atrikasa nasionaly momba ny lavanila
Mpizaika manodidina ny 250 no andrasana handray anjarana amin’ny atrikasam-pirenena momba ny lavanila izay ato ao Sambava ny 04 sy 05 mey 2016.Araka ny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny Vovonana nasionaly momba ny lavanila, Njaka Landri, dia andrasana amin’ity atrikasa ity ny hahazo ireo tolo-kevitra sy fitarainana avy amin’ny tantsaha, ary koa sosokevitra hoentina hanatsarana ity lalampihariana ity.
mardi, 03 mai 2016 13:08
NY FAMINDRAM-PO NO SITRAKO, FA TSY NY SORONA !
Fanambaran'ny Fivondronam-be ny Eveka Katolika eto Madagasikara NY FAMINDRAM-PO NO SITRAKO, FA TSY NY SORONA !